दोस्रो चरणको खोप लगाएकाहरु कति सुरक्षित – Kantipur Np
दोस्रो चरणको खोप लगाएकाहरु कति सुरक्षित
प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख १९, २०७८ समय: १९:०२:२३
वैशाख, काठमाडौं । पछिल्लो समय दोस्रो चरणको खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूमा पनि कोभिड–१९ संक्रमण देखिएको छ ।
मेडिकल भाषामा यसलाई ‘बे्रेक थ्रु’ संक्रमण भनिन्छ । यो संख्या एकदमै न्यून रहेको छ । तर, यसबाट भ्याक्सिनको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा जनमानसमा आशंका भने बढेको छ । तर आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । यस खालको ‘ब्रेक थ्रु’ एकदमै कम देखिएको छ भने देखिए पनि संक्रमण भएकामा एकदमै कम लक्षण वा बिरामीलाई धेरै असहज नहुने गरेको छ ।
अघिल्लो साता इण्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चले ‘ब्रेक थ्रु’ इन्फेक्सन एकदमै विरलै भएको र भ्याक्सिन लगाएकामध्ये ०.०५ प्रतिशत भन्दा कममा देखिएको उल्लेख गरेको थियो । केही प्रतिशतमा यो देखिनु सामान्य हो किनभने कुनै पनि खोप शतप्रतिशत प्रभावकारी देखिएको छैन ।
अमेरिकाको सेन्टर फर डिजिज प्रिभेन्सन एण्ड कन्ट्रोलका अनुसार भ्याक्सिन (खोप) लगाएका व्यक्तिहरू कम बिरामी हुने सम्भावना छ । परीक्षणकै क्रममा विभिन्न खालका भ्याक्सिनहरू ६० प्रतिशतदेखि ९५ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी देखिएका थिए । नेपालमा पनि खोप लगाएकामा पुन संक्रमण देखिएको छ तर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग यसको आधिकारिक तथ्यांक छैन ।
भ्याक्सिन लगाएपछि पनि तपाईं कोरोना पोजेटिभ हुने सम्भावना कति छ ? यस भएमा तपाईंले के गर्नुपर्छ ? हामीले यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेका छौं ।
ब्रेक थ्रु इन्फेक्सन भनेको के हो ? यो पुनः संक्रमण भन्दा कसरी फरक छ ?
अहिले त्यस खालको कुनै पनि प्रमाण छैन । भारतको एपोलो हस्पिटलका डा.अन्जान भट्टाचार्यले इण्डिया टुडेसँग भनेका छन्, ‘पहिलो त हामीले के सम्झनुपर्छ भने कुनै पनि भ्याक्सिन १०० प्रतिशत प्रभावकारी हुन्न र सबै खालका भ्याक्सिनमा ‘ब्रेक थ्रु’ संक्रमण हुने केही सम्भावना रहेको हुन्छ ।’
दोस्रो लहर आएपछि विभिन्न खालको नयाँ र बढी संक्रामक भेरियन्टहरू देखिएका छन् । भारतका एक पुराना अनुसन्धानदाता डा. गणेश देवकर इण्डिया टुडेसँग भन्छन्, ‘डबल म्युटेट भेरियन्टका सम्बन्धमा, ल्याबहरूले के देखाएका छन् भने यो बढी संक्रामक छ र भाइरसलाई ब्लक गर्ने कार्य एकदमै कठिन छ तर कति प्रतिरक्षा प्रणालीमा कमी आयो भनी मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् ।’
यदि कोभिडको लक्षण देखा परेमा कुनै पनि व्यक्ति तुरुन्त आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ र डाक्टरी परामर्श गर्नुपर्छ । डा. गणेश देवकरका अनुसार खोप लगाउनु भन्दा अगाडिको उपचार र त्यसपछिको उपचारमा खासै फरक छैन ।
Last Updated on: May 2nd, 2021 at 7:02 pm
८९६ पटक हेरिएको